Ungayisebenzisa kanjani i-Ultrasonic Cavitation - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ungayisebenzisa kanjani i-Ultrasonic Cavitation"
I-Ultrasonic cavitation, nayo eyi-acoustic cavitation, ichaza isizukulwane se-cavitation eqinile ngamandla kagesi. Lapho amandla aphezulu, amagagasi e-frequency ephansi ye-Ultra ahlanganiswa abe yi-liquid, kuguqulwe imijikelezo ephezulu / yomfutho ophansi. Ngesikhathi sokushintshwa kwama-vacuum ama-vacuum womzuzu noma amaphokhethi wegesi. Ngemuva kokumiswa kokuqala kwe-bubble ye-cavitation, amandla we-cavity alandelayo abandakanya ukukhula futhi ekugcineni ukuwa kwe-bubble vacuum. Imikhondo ikhula ngemijikelezo eminingana ize ifike lapho iphuzu, lapho ibhamuza le-vacuum lingakwazi ukudonsa amandla amaningi, ukuze i-void ifakwe ngobudlova. Ngesikhathi sokuwa kwe-bubble, kuvela izimo ezibucayi zamandla endawo. Kulezi zingcweti “izindawo ezishisayo”, izinga lokushisa lize lifike ku-5000K, izingcindezi ezifinyelela ku-2000atm, izinga lokushisa eliphakeme ngokweqile kanye nokwehluka kwengcindezi kanye namajethi ka-liquid afinyelela ku-120m / s.
Lawa mandla ashubile asetshenziselwa izinhlelo eziningi ezinjenge-homogenization, emulsization izigaba ezimbili noma ngaphezulu ezingenakuqhathaniswa, ukusatshalaliswa kanye deagglomeration of (nano-) izinhlayiya, milling, cell lysis, isizinda, leaching, ukusabela sonochemical nezinye eziningi.
I-Hielscher Ultrasonics ibaluleke kakhulu ekuthuthukiseni nasekwenziweni kwe-processors ephezulu kakhulu ye-ultrasonic kanye nama-reactor. Ukumboza lonke uhla kusuka kwelebhu, ebhentshini kanye nezinhlelo ze-ultrasonic zezimboni, i-Hielscher ingakunika iprosesa efanelekile kakhulu yohlelo lwakho lokusebenza nenqubo yokuqondisa.
Funda kabanzi mayelana ne-acoustic cavitation kanye nokusebenza kwayo kwilebhu, R&D kanye nezimboni!
Amakhasi angu-12 ngalesi sihloko ayakhonjiswa:
Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic Inline kwama-Wire Saws kanye nezintambo zokusika
Izindawo ezihlanzekile zocingo zibalulekile uma kukhulunywa ngamasaha wocingo namasaha ocingo lwedayimane. Izintambo ezihlanzekile, ezigcinwe kahle kuphela ezikhiqiza ukusikeka okuqondile (isb. Ama-silicon wafers, ama-semiconductors, amaminerali namatshe) ama-ans ahlinzeka ngokusebenza okuphezulu nekhwalithi. I-Ultrasonic inline wire saw…
Izinqubo Zokukhiqiza Ezingasheshi Nezinganele
I-Ultrasonication inqubo esungulwe kahle yokuqinisa inqubo, esetshenziswa ezinhlotsheni eziningi zezicelo zamanzi ezifana ne-homogenization, ukuxuba, ukusabalalisa, ukugaya okumanzi, i-emulsification kanye nokwenza ngcono ukusabela kwamakhemikhali okungafani. Uma inqubo yakho yokukhiqiza ingasebenzi kahle futhi ingasebenzi…
I-Magnesium Hydride Synthesis nge-Hydrolysis
I-Ultrasonication yindlela ephumelelayo futhi elula yokukhiqiza i-magnesium hydride yokugcina i-hydrogen. I-Ultrasound isheshisa i-hydrolysis ye-magnesium ne-hydrogen ukuze yakhe i-magnesium hydride. Ngokuphambene nenqubo ejwayelekile ye-dissociative chemisorption, i-ultrasonic hydrolysis ye…
Isixazululo se-Electrode Surface Fouling
Ukungcoliswa kobuso be-electrode kuyinkinga enkulu ezinqubweni eziningi zokukhiqizwa kwe-electrochemical nakuzinzwa ze-electrochemical. Ukudlidliza i-electrode kungathinta ukusebenza nokusebenza kahle kweseli kagesi. I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokugwema nokususa i-electrode…
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ekhethekile yokuhlukanisa amakhompiyutha we-bioactive kusuka kuma-botanicals. I-Sonication ifinyelela isizinda esiphelele bese ngaleyo ndlela ukutholakala kokukhishwa okuphakeme kutholakala ngesikhathi esifushane kakhulu sokukhishwa. Ukuba yindlela esebenza kahle yokukhipha isizinda, isizinda se-ultrasonic si…
I-Ultrasonic Emulsions ye-Water-in-Diesel Combustion
Ama-generator kagesi, izinjini zemikhumbi nezinjini zesitimela, eziphethwe ngudizili, zingaqhutshwa kahle uma kusetshenziswa amanzi emulsion yedizili. Amafutha e-diesel emulsion anciphisa ukusetshenziswa kukawoyela, ehlise izinga lokushisa lokushisa, ashise izihlanza futhi anciphise ukuphuma, okunjalo…
Ukuxhaphaza ukusebenza okuyingqayizivele kwama-carbon nanotubes (CNTs), kumele ahlakazeke ngokuphelele. Abasabalalisi be-Ultrasonic bayithuluzi elivame kakhulu lokusabalalisa ama-CNTs kokumiswa okwesikhashana okumiselwe amanzi. Ubuchwepheshe bokuhlakaza be-ultrasonic budala ngokwanele amandla aphezulu e-shear ukuze…
I-Chitosan yi-biotolymer eyenziwe nge-Chitin enezicelo eziningi ku-pharma, ukudla, ezolimo kanye nezimboni. I-Ultrasonic deacetylation ye-chitin kuya ku-chitosan iqinisa ukwelashwa kakhulu - okuholela kwinqubo ephumelelayo futhi esheshayo enesithelo esikhulu se-chitosan…
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-milling ye-ultrasonic ingasetshenziswa ngempumelelo ekwakheni ama-nanoparticles e-thermoelectric futhi inamandla okusebenzisa amandla ezinhlayiya. Izinhlayiya ezincibilikile ze-Ultrasonically (isb. I-Bi2Te3-based alloy) zikhombisa ukuncishiswa kosayizi obukhulu futhi kwenziwa…
Isizinda seTerpene yi-Ultrasonics
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic terpene kufakazelwe ukunikeza isivuno esiphezulu se-terpene caryophyllene oxide, isb kusuka kuma-cannabis nama-hops. I-Caryophyllene oxide iyi-terpene etholakala kuma-cannabis, hops, pepper, basil kanye ne-rosemary. Njengesakhi esisebenzayo, kukhishwe i-terpene caryophyllene…
Ultrasonic Cucurmin Extraction
I-Curcumin iyisidakamizwa se-phytochemical yamakhemikhali futhi enempilo kuma-rhizomes e-Curcuma longa. Okokukhipha okuphezulu, i-sonication iyindlela ephumelela kunazo zonke. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuholela kukhwalithi ephezulu, isivuno esikhulu futhi kudinga isikhathi sokucoca esifushane kuphela. I-Ultrasonic…